Havaozin’izy Ireo Ilay Toerana Manan-tantara mba Hianarana Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tiorka Tseky Tsonga Zoloa
31 MEY 2013
NEW YORK—Nampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah indray ilay toerana manan-tantara antsoina hoe Stanley Theater, any New Jersey, tamin’ny 13 Aprily 2013, rehefa avy namboarin’izy ireo nandritra ny enim-bolana. Efa ho 30 taona izay ny Vavolombelona no nanao an’io toerana io ho Efitrano Fivoriambe mba hahafahan’ny olona maro hiara-mianatra Baiboly. Noho ilay fanamboarana dia vao mainka mety tsara hianarana Baiboly maimaim-poana ilay toerana.
Nasiana seza vaovao tao amin’ny Stanley Theater ka vao mainka mahazo aina tsara ny mpanatrika. Misy 250 000 mahery no manatrika ny fandaharana atao ao isan-taona. Nasiana fitaovana fandefasana video avo lenta koa ao amin’ilay efitra lehibe sy ireo efitra maromaro eo akaikiny, ka ho an’ny Tenin’ny Tanana Amerikanina no tena nanaovana an’izany.
Vavolombelon’i Jehovah miasa an-tsitrapo ny ankamaroan’ireo nandray anjara tamin’ilay tetikasa. Avy any amin’ny toerana samihafa manerana an’i Etazonia izy ireo ka tonga mba handray anjara amin’ny fanamboarana an’io toerana tranainy nefa manan-tantara io.
Efa tao New Jersey ny Stanley Theater taloha kelin’ny 1930, ary io no anisan’ny lehibe indrindra amin’ny toerana fijerena sinema any Etazonia. Voatery nakatona ilay izy tamin’ny 1978, ary efa saika simba nefa namboarin’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1983. Nampiasain’izy ireo indray io toerana io tamin’ny 1985 mba hianarana Baiboly.
Hoy i J. R. Brown, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah, momba an’ilay fanamboarana natao vao haingana: “Trano fivavahana no tena ampiasana ny Stanley Theater. Olona avy amin’ny fiteny 15 mahery no tonga ao mba hianatra Baiboly. Tena tian’ny mponin’i New Jersey koa anefa io toerana io ka mahafaly ny fandaminanay ny manao izay hahatonga azy ho tsy tontan’ny ela.”
Iraisam-pirenena: J. R. Brown, Biraon’ny Filazam-baovao, tel. +1 718 560 5000
Video: Havaozina ny Stanley Theater